China Cylindrical Roller Bearing vagadziri uye vatengesi |Xinri
Cylindrical roller bearings inowanikwa mumhando dzakasiyana-siyana dzemagadzirirwo, akatevedzana, akasiyana uye saizi.Misiyano mikuru yekugadzira ndiyo nhamba yemitsara ye roller uye yemukati / yekunze mhete flanges pamwe chete nekeji magadzirirwo uye zvinhu.
Iwo mabearings anogona kusangana nematambudziko ekushandisa anotarisana neanorema radial mitoro uye kumhanya kwakanyanya.Kugadzirisa axial displacement (kunze kwemabhearings ane flanges pane zvose zvemukati nekunze zvindori), zvinopa kuoma kwepamusoro, kuderera kwakaderera uye hupenyu hurefu hwebasa.
Cylindrical roller bearings inowanikwawo mune zvakavharwa kana kupatsanurwa magadzirirwo.Mumabheya akavharwa,iyo rollers inodzivirirwa kubva kune zvinosvibisa, mvura uye guruva, nepo ichipa lubricant kuchengetedza uye kusvibiswa kubviswa.Izvi zvinopa kuderera kwakaderera uye hupenyu hurefu hwebasa.Split bearings inoitirwa kunyanya kubereka hurongwa hunonetsa kuwana, senge crank shafts, kwavanorerutsa kuchengetedza uye kutsiva.
Zvimiro uye Zvimiro
Mujaho uye muviri unomonereka wecylindrical roller bearing une geometric shapes.Mushure mekugadzirwa kwakagadziridzwa, simba rekutakura rakakwirira.Iyo nyowani yekugadzira dhizaini yeroller yekupedzisira kumeso uye roller yekupedzisira kumeso haisi kungovandudza iyo inotakura axial kutakura kugona, asi zvakare inovandudza iyo lubrication mamiriro eiyo roller yekupedzisira kumeso uye nzvimbo yekusangana yeroller yekupedzisira kumeso uye roller end face, uye inovandudza kuita kwebearing.
● Kutakura mutoro wepamusoro
● Kuomesa musoro
● Kukweshana kwakaderera
Kunze kwemabearings ane flange pamarin ese emukati neekunze.
● Iyo yakavhurika flange dhizaini
Pamwe chete neroller yekupedzisira dhizaini uye kupedzisa kwepamusoro, kusimudzira lubricant firimu kuumbwa kunokonzeresa kukweshana kwakadzika uye yakakwirira axial mutoro wekutakura kugona.
● Upenyu hurefu hwebasa
Iyo logarithmic roller profil inoderedza kushushikana kwemupendero pane roller/raceway kuonana uye sensitivity kune misalignment uye shaft deflection.
● Kuwedzera kuvimbika kwekushanda
Iyo yekumusoro kupedzisa pane yekubata kumeso kwema rollers uye mijaho inotsigira kuumbwa kweiyo hydrodynamic lubricant firimu.
● Zvinoparadzana uye zvinochinjika
Izvo zvinopatsanurika zvikamu zve XRL cylindrical roller bearings zvinochinjika.Izvi zvinofambisa kukwira nekudzika, pamwe nekuongorora kwekugadzirisa.
Inoshandiswa zvakanyanya mumahombe uye epakati-saizi mota, locomotives, muchina maturusi spindle, emukati emoto injini, majenareta, turbines egasi, magiya mabhokisi, zvigayo zvinotenderedza, vibrating skrini, uye kusimudza nekutakura muchina.
Zvakapfuura: Tsono Roller Bearings
Zvinotevera: Spherical Roller Bearings